Sidee baan ku dari kartaa farshaxanka si fudud loo iPod
Sida loo fudud ku dari farshaxanka si iPod
> Resource > iPod > Sida loo fudud ku dari farshaxanka si iPod
Waxa ay noqon doontaa farxad weyn in ay dhagaystaan ​​music ku saabsan iPod iyo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka badan sida ay awoodaan in ay arkaan farshaxanka, halka dhagaysto. Waa, si kastaba ha ahaatee, ma si sahlan sida aad u malaynayso in ay farshaxanimada u heesaha oo dhan aad synced ka Lugood. Kaliya heesaha qaarkood si toos ah u soo bandhigo farshaxanka, kuwa aad soo iibsatay ka Lugood ama dukaamada kale music. Iyadoo heeso kale oo aad ka diiwaan websites ama dooxay ka CD-yada ayaa laga yaabaa in farshaxanka maqan.
Jirran ku filan oo ah arkaysid icon cirrada bas ee guud ahaan aad iPod? Waxaan ku tusi doona sida in la helo habka ugu fudud artwork--. The Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) waa waxa lagu talinayaa. Barnaamijkan wuxuu si toos ah uu ogaado arts oo dhan oo aad gabayo Lugood iyo aad Cudarada karaa arts in ay file music kasta. Markaasuu u hagaagsan music in aad iPod iyo farshaxanka waxay kor u tusi doonaa marka aad muusig ah. Bal aan fiirino sida ay u gaaraan tan hoos ku qoran.
1 barnaamijka dar maktabadda Lugood aad
Download barnaamijkan oo ku xidh aad Mac. Marka aad u furo ka dib markii la rakibey, waxaa si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood aad ku darto oo dhan music ee. Iyo barnaamijka samayn doonaa iskaanka ah mar kasta oo aad furi.
2 Raadi arts oo dhan oo music ah
Tag madax u ah barnaamijka iyo heli badhan Scan. Markaas sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan aad u bilowdo hawsha baadhitaanka farshaxanka. Macluumaad kale sida artist, magaca track iyo xitaa lyrics sidoo kale waxaa laga heli karaa jidka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sax ku checkbox ee Search for labalaabka Songs, barnaamijka ayaa sidoo kale u samayn karaa shaqo weyn si ay uga caawiyaan sidii aad ku heli tus in Lugood.
3 Embed arts in files music ah
Riix hees iyo arko ay farshaxanimada khaanadda xaqa ka furmo suuqa hoose. Waxa kale oo aad eegi kartaa macluumaad kale oo ka dibna riix badhanka Codso in Cudarada dhammaan macluumaadka ay u files music ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad beddesho farshaxanka ee muusiga, riix icon Edit ku khaanadda saxda ah iyo jiidi image maxali ah si ay u meel tahay albumka. Markaasaa waxaa u sameeyay.
4 songs nidaameed in aad iPod
Haddaba iPod aad u hagaagsan karaa heesaha oo dhan sida aad sida caadiga ah u samayn. Bareesada in aad iPod in computer Mac iyo xidhmaan Lugood. Markaas iPod ku wareejiyo heeso aad ugu jeceshahay.
Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad ku siin shot a. Markaas waxaad heli kartaa maktabadda weyn iPod inay ku raaxaystaan ​​on go ah.
Sidee baan ku dari kartaa Album Art on My iPhone
Sidee baan ku dari kartaa farshaxanka si My Lugood Library
Sida loo fudud ku dari Image in Your MP3 dhammaan faylasha
Qulquli Music inay iPod ka PC
Sida loo Delete Songs ka nano iPod
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga BlackBerry in iPod
Top 4 iPod Transfer Tools
Sida loo saar Music Videos on iPod
Kaabta Music iPod si aad u computer ama Lugood
Sida loo Delete Photos ka iPod Si fudud
Sida loo Undelete Notes on iPod xiriiri 4/5
Sidee inuu ka soo kabsado Music ka iPod